FAMPISEHOANA 45 RBU 12.5K
FAMPISEHOANA 45 RBU 25K
FAMPISEHOANA 45 RBU 50K
FAMPISEHOANA 45 RBU 75K
FAMPISEHOANA 45 RBU 100K
PRISESO ANY & GAS
IZAY ANKAFIDOO ARY ATAO ANKADINDRY
SI Group dia orinasa mpamokatra sy fampiasana ny varotra eran'izao tontolo izao manana traikefa mihoatra ny 20 taona. SI Group dia manana tamba-jotra mifandraika amin'ny eran'izao tontolo izao amin'ny fahafahany mamatsy firenena na orinasa misy izay tena ilain'izy ireo. Izahay dia mitazona entana feno entana sy entona entin'ny entona malefaka amin'ny endrika Vary, siramamy, Soyese, katsaka sns ary hitady ireo fitaovana vaovao any amin'ireo tsena vao misondrotra. SI vondrona dia afaka manampy amin'ny famoronana tsena izay mbola tsy nisy taloha tany amin'ny firenena maro tamin'ny alàlan'ny fanampiana ny governemanta hampiditra ny vokatry ny fambolena vaovao sy ny fanadiovana entana any amin'ny tsena manerantany. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny fangatahana manokana momba ny entam-barotra malefaka satria afaka manome izany izahay.
Ny entana sarotra toy ny Iron Ore, Arina, Mitroka, Copper ary Solika dia arotsaka ary misy na ny vondrona SI. Manana fifandraisana maharitra amin'ny governemanta sy ny orinasa manerana izao tontolo izao izahay izay mamela antsika hanome ny entana tena izy amin'ny vidin'ny fifaninanana. SI Group dia manakarama ireo orinasa rehetra iasantsika mba ahafahan'izy ireo manana fahafahan'izy ireo mahavita mamita trosa. Misolo tena ny mpividy sy mpivarotra izahay ary manolotra vahaolana ho an'ny roa tonta, raha mpamatsy mitady mpihaino manerantany ianao ary ekipa matanjaka miantsena ny fifandraisan'ny entana omenao anay anio.
SI Group dia mpamatsy ny Iron Ore, Copper, Coal, Scrap Metal, Solika ary vokatra fambolena manerana an'izao tontolo izao.
Mifandraisa aminay androany info@sigroupco.com ary mahazo valiny ao anatin'ny 24 ora.
Ny marika SI Group dia novolavolaina ary namboarina tany Suisse ho fanehoana ireo zava-tsarobidy sarobidy izay asiana mena fa vato sarobidy. Ireny entana lafo vidy hita eran'izao tontolo izao dia mivoaka amin'ny voaomana ny tany ary alefa eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny ranomasina manerana an'izao tontolo izao. Mifandray ny volafotsy ny entam-barotra mena dia maneho ny sambo sy ny fomba fitaterana any amin'ireo ranomasina dimy manerantany.
Copyright © 2020 | SI Group | Zo rehetra voatokana.